ဟေတီသမ္မတ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရခြင်းအပေါ် အမေရိကန်သမ္မတ နှင့် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချ - Xinhua News Agency
လုပ်ကြံခံရသော ဟေတီနိုင်ငံသမ္မတ မော်စီ (Jovenel Moise) အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန် ၊ ဇူလိုင်၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က ဟေတီနိုင်ငံသမ္မတဂျိုဗီနယ်မော်စီ (Jovenel Moise) လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရခြင်းအပေါ် “ လူမဆန်သောလုပ်ရပ်” တစ်ခုအဖြစ် ဇူလိုင် ၇ ရက်က ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ကြောင်း သိရသည်။“ ဟေတီနိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုဗီနယ်မော်စီ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ သမ္မတကတော် မာတင်မော်စီ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ သတင်းတွေကြားရတော့ ကျွန်တော်တို့ သိပ်ကို ဝမ်းနည်း တုန်လှုပ်မိပါတယ် ” ဟု ကြေညာချက်တစ်ခုတွင် ဘိုင်ဒန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒီလိုရက်စက်ယုတ်မာတဲ့အပြုအမူကို ကျွန်တော်တို့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချပါတယ် ၊ သမ္မတကတော်မော်စီ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်ဖို့ ကျွန်တော် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါတယ် ” ဟူ၍လည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဟေတီပြည်သူတွေအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ် ၊ ဟေတီလုံခြုံရေး နဲ့ဘေးကင်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကို ဆက်ပြီးအကူအညီပေးသွားဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်” ဟု ဘိုင်ဒန်က ဆိုသည်။
“ ဟေတီနိုင်ငံအတွက် သိပ်ကို စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ် ” ဟု ဘိုင်ဒန်က အီလီနွိုက်သို့ မထွက်ခွာမီ အိမ်ဖြူတော်၌ သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
ဟေတီယာယီဝန်ကြီးချုပ် Claude Joseph က သမ္မတ မော်စီ သည် ၎င်းနေအိမ်၌ သေနတ်ပစ်ခံရပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း ဇူလိုင် ၇ ရက် အစောပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ မော်စီသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်က လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် နှောင့်နှေးခဲ့ပြီးနောက် ဟေတီနိုင်ငံအား အမိန့်အာဏာဖြင့် စီမံ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ရာထူးသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် နိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။
ဟေတီနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို ဧပြီလတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း အမျိုးသားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုသို့ ဟေတီသမ္မတမော်စီလုပ်ကြံသတ်ခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်က ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် အပြင်းထန်ဆုံးစကားလုံးဖြင့် ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့သည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား တရားဥပဒေရှေ့မှောက်သို့ အရောက်ပို့ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ထို့ပြင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ဟေတီနိုင်ငံပြည်သူ ၊ အစိုးရ နှင့် သမ္မတမော်စီ၏ ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များ အတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဂူတာရက်စ်၏ ကြေညာချက်အား ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Stephane Dujarric ဖတ်ကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ဟေတီပြည်သူများအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာကြရန် ၊ ယခုကဲ့သို့ စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဖွယ် အကြမ်းဖက်မှုမျိုး အားလုံးကို ဆန့်ကျင်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆက်လက်တည်ရှိကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ဟေတီအစိုးရ နှင့် ပြည်သူများနှင့်အတူ ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကြေညာချက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။(Xinhua)
Biden and UN chief condemn assassination of Haitian president
WASHINGTON, July7(Xinhua) — U.S. President Joe Biden on Wednesday condemned the assassination of Haitian President Jovenel Moise, calling ita“heinous act.”
“We are shocked and saddened to hear of the horrific assassination of President Jovenel Moise and the attack on First Lady Martine Moise of Haiti,” Biden said inastatement.
“We condemn this heinous act, and I am sending my sincere wishes for First Lady Moise’s recovery,” he added. “The United States offers condolences to the people of Haiti, and we stand ready to assist as we continue to work forasafe and secure Haiti.”
“It’s very worrisome about the state of Haiti,” Biden told reporters at the White House before leaving foratrip to Illinois.
Haitian Interim Prime Minister Claude Joseph said early Wednesday that Moise was shot dead at his home.
Moise has been ruling Haiti by decree after legislative elections due in 2018 were delayed. Disputes have been around on when his term ends.
Haiti’s constitutional referendum, which should have taken place in April but was postponed due to the COVID-19 pandemic, will be held on Sept. 26, the national electoral commission announced on June 28.
UN Secretary-General Antonio Guterres on Wednesday condemned “in the strongest terms” the assassination of Haitian President Jovenel Moise.
The perpetrators of this crime must be brought to justice. The secretary-general extended his deepest condolences to the people and government of Haiti and the family of the late president, said Stephane Dujarric, the spokesman for Guterres, inastatement.
The secretary-general called on all Haitians to preserve the constitutional order, remain united in the face of this abhorrent act and reject all violence, said the statement.
The United Nations will continue to stand with the government and the people of Haiti, it said. Enditem
File photo of Haitian President Jovenel Moise. (Xinhua/Luz Sosa)